မိသားစုဝင်တွေ အချိန်တိုင်း ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့ မိမိ နေအိမ်ကို ပိုးသတ်သန့်စင်ပေးကြပါစို့ - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မိသားစုဝင်တွေ အချိန်တိုင်း ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့ မိမိ နေအိမ်ကို ပိုးသတ်သန့်စင်ပေးကြပါစို့
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ပိုးသတ်သန့်စင်ပေးတဲ့ အလေ့အထက ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကပ်ငြိပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးတဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ အလေ့အထတစ်ခုလို့ ဆိုပါတယ်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့ နေရာတွေ မဟုတ်ရင်တောင် ပုံမှန် ပိုးသတ်သန့်စင်ပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေထဲမှာ အိမ်၊ ရုံး၊ စာသင်ကျောင်း၊ အားကစားရုံ၊ အများပြည်သူသုံး အဆောက်အဦး၊ ဘာသာရေးစင်တာ၊ ဈေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ စီးပွားရေး အချက်အချာကျတဲ့ နေရာတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးက ထိတွေ့လိုက်တဲ့ မျက်နှာပြင်တွေကနေ ကူးစက်နိုင်ခြေထက် လူတွေကနေတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ခြေ အများကြီး ပိုရှိနေပေမဲ့ အိမ်ကနေ အပြင်ကို မထွက်ရင်တောင် နေ့တိုင်း ထိတွေ့နေရတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေကို တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် သန့်ရှင်း၊ ပိုးသတ်ပေးဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်တားဆီးရေးဗဟို (CDC) ကနေ အကြံပြုထားပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အိမ်မှာ လူတွေဖြစ်ဖြစ်၊ အခြား အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ဖြစ် အဝင်၊ အထွက် ရှိနေတာနဲ့ ရောဂါပိုး ပါလာနိုင်ခြေ ရှိနေလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် အိမ်ကို ပုံမှန် သန့်ရှင်း၊ ပိုးသတ်ပေးတာက ကိုယ်တိုင်ရော၊ ကိုယ့်မိသားစုရော ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိနေဖို့ မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ့်အရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာနဲ့ ပိုးသတ်သန့်စင်တာ ဘာများကွာခြားလို့လဲ?
ဒီမေးခွန်းအတွက် အရင်ဆုံး သိထားရမှာကတော့ သန့်ရှင်းရေး လုပ်တာနဲ့ ပိုးသတ်သန့်စင်တာဟာ လုံးဝကို မတူတဲ့ အလုပ်နှစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာ မျက်စိနဲ့ မြင်နိုင်တဲ့ ဖုန်တွေ၊ အမှိုက်တွေကို ဖယ်ရှားလိုက်တာပါ။ ဒါက ညစ်ပေနေတဲ့ အဝတ်စတစ်ခုကို လျှော်လိုက်တာ၊ ကော်ဖီစားပွဲကို အဝတ်တစ်ခုနဲ့ သုတ်လိုက်တာပါပဲ။ ကြည့်လိုက်ရင် သန့်သွားတယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ မညစ်ပတ်တော့တာကို ရောဂါပိုးမွှားတွေ မရှိတော့ဘူးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။
ပိုးသတ်သန့်စင်တယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မျက်နှာပြင်တွေမှာ နေထိုင်ပေါက်ဖွားနေတဲ့ ပိုးမွှားတွေကို ထပ်ပြီး ပြန့်မသွားအောင် သတ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်တွေဟာ သူတို့ကပ်နေတဲ့ မျက်နှာပြင်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားအပေါ်မူတည်ပြီး နာရီအတော်ကြာ၊ တစ်ခါတလေ ရက်အတော်ကြာတဲ့အထိ ရှင်သန်နိုင်တဲ့အတွက် ပိုးသတ်သန့်စင်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အိမ်မှာ ပိုးသတ်လေ့ရှိတဲ့ အလေ့အထတစ်ခုကို ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် အစွန်းချွတ်ဆေးနဲ့ အိမ်သာခွက်ကို တိုက်တတ်ကြတာမျိုးပါပဲ။
အိမ်ရဲ့ ဘယ်နေရာတွေကို အဓိက ပိုးသတ်ရမလဲ?
WHO ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေအရ အထူးသဖြင့် အခုလို ကိုရိုနာရောဂါ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်အတွင်း အိမ်မှာ လူတွေနဲ့ အများဆုံးထိတွေ့တတ်တဲ့ မျက်နှာပြင်တွေကို ပိုးသတ်သန့်စင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နေ့တိုင်း တစ်အိမ်လုံးက ရှိသမျှနေရာတွေကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ ပိုးမွှားတွေ ရှိနေတတ်တဲ့ နေရာတွေကို အဓိက ပိုးသတ်ပေးရင် ရပါတယ်။
ဒီလို အဓိကနေရာတွေထဲမှာ တံခါးနဲ့ ပြတင်းပေါက် လက်ကိုင်တွေ၊ မီးဖိုချောင်နဲ့ အစားအသောက် ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်တဲ့ နေရာတွေ၊ မီးဖိုချောင် ဘေစင်ကောင်တာ အပေါ်၊ အောက် နေရာတွေ၊ အိမ်သာနဲ့ ရေပိုက်ခေါင်းတွေ၊ ဖုန်းလိုမျိုး တစ်ကိုယ်ရေသုံး ပစ္စည်းတွေရဲ့ မျက်နှာပြင်တွေ၊ ကွန်ပျုတာကီးဘုတ်၊ ကလေးစာကြည့်စားပွဲနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အရင် သန့်ရှင်းပြီးမှ ပိုးသတ်ပါ။
အရင်ဆုံး မျက်နှာပြင်ပေါ်က ညစ်ထေးနေတဲ့အရာတွေ၊ ဖုန်နဲ့ အမှိုက်တွေကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ဒါတွေကို ဆပ်ပြာရည်တို့၊ သန့်စင်ဆေးရည်တို့ ဖြန်းပြီး လက်သုတ်ပုဝါနဲ့ သုတ်လိုက်ရင် ရပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်တဲ့အခါမှာ အညစ်အထေး မရှိတဲ့ အသန့်ဆုံးနေရာကနေ စလုပ်ပြီး အညစ်အထေး အများဆုံးနေရာကို နောက်ဆုံးမှ သန့်ရှင်းရပါတယ်။ ဒါမှ ညစ်ပတ်နေတဲ့အရာတွေက သန့်တဲ့နေရာတွေဆီ ပြန့်မသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပြီးရင်တော့ ပိုးမွှားတွေကို ထိရောက်မှုရှိရှိ သတ်ပေးနိုင်တဲ့ မျက်နှာပြင်သုံး ပိုးသတ်ဆေးတစ်ခု ဖြန်းလိုက်ရုံပါပဲ။ အမြန်ဆုံးနဲ့ အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်းကတော့ ပိုးသတ်တဲ့ ဖြန်းဆေး ဒါမှမဟုတ် ပိုးသတ်တဲ့ လက်သုတ်ပဝါတွေ သုံးတာပါ။
အရမ်းလွယ်တယ်မှလား! နေ့တိုင်း လုပ်နေကျ အိမ်အလုပ်တွေထဲမှာ အချိန်ခဏလေး ထပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ ကိုယ်တိုင်ရော၊ ကိုယ့်အိမ်သားတွေရော ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေ လျော့နည်းသွားအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို အိမ်မှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့နဲ့ ပိုးသတ်ဖို့ ဘယ်လို ပိုးသတ်ဆေးကို သုံးသင့်ပါလဲ?
WizAct 24 က နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ မျက်နှာပြင် ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်ပြီး မကြာခဏ ထိတွေ့ဖြစ်တဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်က ၉၉.၉% သော ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို (၂၄) နာရီလုံးလုံး ပိုးသတ်ပြီး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ WizAct 24 က အခြားသာမန် ပိုးသတ်ဆေးတွေနဲ့ မတူပါဘူး။ မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်မှာ WizAct 24 ဖြန်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ၉၉.၉% သော ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ကင်းစင်သွားရုံသာမက ဒီပိုးသတ်နိုင်စွမ်းက အဲ့ဒီ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်က ဆက်ပြီး ရှိနေမှာဖြစ်လို့ လူတွေဘယ်လောက်ပဲ ထပ်ပြီး ထိတွေ့ပါစေ (၂၄) နာရီလုံး ပိုးသတ်နိုင်တဲ့ မျက်နှာပြင်တစ်ခုအဖြစ် ဆက်ပြီး ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သတိပြုရမယ့် အချက်တစ်ခုက မျက်နှာပြင်တစ်ခုမှာ WizAct 24 ဖြန်းပြီးရင် ဆေးတွေကို မသုတ်ပစ်ဘဲ ဒီအတိုင်း အခြောက်ခံပေးဖို့ အရေးကြီးတယ် ဆိုတာပါပဲ။
ပြီးတော့ WizAct 24 ဟာ Actiguard ရဲ့ နည်းပညာဖြစ်တဲ့ Actizone အသုံးပြုပြီး ပိုးသတ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်နည်းစနစ်တစ်ခုကို အသုံးပြုထားတဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး ပိုးသတ်ဆေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Actiguard နည်းပညာဆိုတာကတော့ US EPA RSS24 နဲ့ UK BSI PAS2424 တို့ရဲ့ ပိုးသတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တွေအရ ပိုးသတ်ဆေး စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ ပြည့်မီမှုရှိပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို (၂၄) နာရီကြာ နှိမ်နင်းပေးနိုင်တဲ့ နည်းပညာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
WizAct 24 ကို ဘယ်လို ဝယ်လို့ရလဲ?
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ WizAct 24 ကို 450ml အရွယ်အစားနဲ့ နီးစပ်ရာ စတိုးဆိုင်တွေကနေ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ WizAct 24 450ml အရွယ် ဘူးတစ်ဘူးကို အကြိမ် (၇၀၀) လောက်အထိ ဖြန်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဘူးချင်း ဈေးကတော့ မြန်မာငွေ (၄၂၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။
WizAct 24 ကို အပြင်သွားတဲ့အခါ ယူသွားနိုင်ဖို့ အိပ်ဆောင်ဖြန်းဆေးဘူးပုံစံနဲ့လည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ WizAct 24 အိပ်ဆောင်ပိုးသတ်ဖြန်းဆေးဘူး (18ml) ကို မြန်မာငွေ (၁၀၀၀) ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ အမျိုးအစားတစ်ခုကတော့ WizAct 24 ပိုးသတ်ပဝါ ဖြစ်ပါတယ်။ WizAct 24 ပိုးသတ်ပဝါ (၁၀) ခုပါ တစ်ထုပ်ကို မြန်မာငွေ (၁၀၀၀) ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အပြင်သွားနေရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်နှာပြင်တွေနဲ့ တစ်ကိုယ်ရေသုံး ပစ္စည်းတွေကို ပိုးသတ်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
WizAct 24 ကို Myanmar Distribution Group ကနေ တင်သွင်းဖြန့်ချိတာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှာ အရောင်းတာဝန်ခံ ရုံးခွဲတွေ ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ ရုံးခွဲတွေရဲ့ တည်နေရာတွေကို www.myanmardistributiongroup.com မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ WizAct 24 အကြောင်း အသေးစိတ် စုံစမ်းမေးမြန်းချင်ရင်တော့ ဖုန်း – ၀၁ ၄၀၀၅၃၃ ၊ ၀၁ ၄၀၀၅၄၄ နဲ့ အီးမေးလ် – info@mdgmyanmar.com ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ WizAct 24 အကြောင်းနဲ့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးဖို့ အွန်လိုင်းကနေ အော်ဒါတင်ချင်ရင် www.facebook.com/WizAct24Myanmar မှာလည်း ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
🩸 သွေးအားနည်းခြင်းကို ဖြစ်စေသော ‌အကြောင်းအရင်း ( ၃ ) ချက်
🩸 သွေးအားနည်းခြင်းကို ဖြစ်စေသော ‌အကြောင်းအရင်း ( ၃ ) ချက်~~~~~~~~~~~ တကယ်လို သင်ဟာ သွေးအား နည်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ဆီကို သွေး တွေကနေတစ်ဆင့် အောက်စီဂျင်ကို လုံလောက်အောင် သယ်ယူ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ 👉ဘာကြောင့်…